विवाहपछि एक्कासी किन मोटाउँछन् महिला ? - Khabar Break | Khabar Break
धेरैजसो महिलाहरु विवाहपछि छिट्टै मोटाउने गरेको देखिन्छ । धेरै महिलाहरुले विवाहपछि कम समयमा नै मोटाएको भनेर गुनासोसमेत गरिरहेका हुन्छन् । दुब्ली–पातली भएका महिलाहरुसमेत विवाहपछि मोटाउने गर्छन् । मानिसहरु खुशी हुँदा वा तनावमुक्त हुँदा मोटाउने गर्छन् । विवाहपछि जिम्मेवारी बढ्नुका साथै घरको काम पनि बढ्ने गर्छ । काम बढेसँगै तनाब पनि बढ्दै जान्छ । तनावले त तौल घट्नु पर्ने हो । तर, विवाहित महिलाहरु दुब्लाउनुभन्दा पनि उल्टै मोटाइरहेका हुन्छन् । विवाहपछि एक्कासी कसरी मोटाउछन् त महिलाहरु ?
विवाहअघि केटा नपाउने डरले महिलाहरुले आफूलाई स्वास्थ्य र राम्री राख्नु सामाजिक दबाबका रुपमा लिएर तौल घटाउने तथा नियन्त्रणमा राख्ने गर्छन् । तर, विवाहपछि यो प्रेसर घटेर जानुका साथै घरको कामले आफ्नो ख्याल राख्ने समय पनि नहुँदा उनीहरुको तौल अचानक बढ्ने गर्छ । विवाहपछि जीवनशैली पूरै नै परिवर्तन हुने भएकोले महिलाहरुको शरीरमा हर्मोनल परिवर्तन आउँछ जुन मोटोपनको कारण बन्न सक्छ ।
विवाहपछि बिस्तारै महिलाको उमेरमा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । उमेरको वृद्धि भएसँगै महिलाको मेटाबोलिजम कम हुन गइ शारीरिक रुपमा निष्क्रिय हुन नसकेको खण्डमा शरीरमा भएको बोसो पग्लिन सक्दैन । बोसो सबै शरीरको भागमा थुप्रिन गएर तौल बढ्न पुग्छ ।
यस्तै मन सन्तुष्ट भएको खण्डमा पनि मानिस छिट्टै मोटाउने गर्छन् । भर्खर विवाह गरेका महिलाहरु निकै खुशी हुने भएका कारणले मोटाउने गरेको समेत पाइन्छ । विवाहपछि महिलाहरुको दिनचर्या नै बेग्लै हुने गर्छ । उनीहरुको सुत्ने, उठ्ने तथा खाने समय सबैमा परिवर्तन आउने गर्छ । आफूले गरिरहेको कामको एक्कासी समय परिवर्तन हुनु पनि मोटाउनुको मुख्य कारण बन्न जान्छ ।
अधिकांश महिलाहरु विवाहपछि घरभित्रकै काममा व्यस्त हुन्छन् । बाँकी फुर्सदको समयमा सुत्ने र टिभी हेरेर बिताउने गर्दा शारीरिक रुपमा निष्क्रिय हुन्छन् जसकारणले शरीरमा बोसो लगेर मोटोपन बढ्ने गर्छ । विवाहपछि नयाँ खान खाने तरिका, परिकार र समयको फरकले गर्दा विवाहित महिला छिट्टै मोटोपनको शिकार हुने गर्छन् । घरको नयाँ सदस्य भएका कारण परिवारका सदस्यले सुरुमा धेरै खान प्रोत्साहन गर्ने भएकाले पनि महिलाहरुको तौल बढ्नेसमेत देखिन्छ ।
धेरै महिलाहरुको सुत्ने र उठ्ने समय बदलिनुका कारण पनि शरीरको तौल बढ्ने हुन्छ । तर, घरभन्दा बाहिर काम गर्ने महिलाहरुको भने शरीरको तौल यसरी एक्कासी बढ्न पाउँदैन । उनीहरुले हतारहतार घरको काम सकेर अफिस भ्याउनु पर्ने हुँदा उनीहरुको शारीरिक कसरत हुने गर्छ जसकारण शरीरको तौल छिट्टै बढ्न सक्दैन । विवाहपछि पनि महिलाहरुले केही समय निकालेर ब्यायाम गर्नुका साथै स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनु पर्छ । यसले शरीरको तौल नियन्त्रण गर्न मात्र नभएर शरीरलाई अल्छिपन र थकानबाट हटाउनुका साथै विभिन्न रोगहरु लाग्न नदि शरीर स्वस्थ हुने गर्छ ।